By နေပြည်တော် On အောက်တိုဘာ 13, 2020
နိုင်ဂျီးရီးယားတောင်ပိုင်း၊ မြစ်ချောင်းများပြည်နယ်မှဆန္ဒပြသူများသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတားမြစ်ထားသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားဆန့်ကျင်။ ပြည်နယ်မြို့တော်၊ Port Harcourt တွင်အစိုးရထိုင်ခုံသို့ ဦး တည်ချီတက်ကြသည်။ သရုပ်.
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Nyesom Wike က #EndSARS ဆန္ဒပြမှုများသည်နိုင်ငံ၏အခြားဒေသများတွင်ဆန္ဒပြမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တွင်လူသိများသောအထူး Anti-Theft Brigade (Sars) ၏အာဏာပိုင်များမှဖျက်သိမ်းခဲ့သော်လည်းမလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူ၏ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် လူသတ်မှု တရားမဝင်။
Owona Nguini သည် MRC နှင့် Equinoxe Tv တို့ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်
နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်သား ၁၅ ဦး ပါဝင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်…
"ရဲကတားမြစ်ချက်ကိုကျင့်သုံးဖို့နဲ့ချိုးဖောက်သူတွေကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူဖို့သေချာစေဖို့လည်းလိုတယ်" ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။ Paulinus Nsirim Twitter ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာရှိနေသော်လည်းဆန္ဒပြသူများသည် Pleasure Park တွင်ဆန္ဒပြနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့၏ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များရှိသူတို့လမ်းတစ်လျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ principale.
ဆန္ဒပြသူတစ် ဦး ဖြစ်သောခရစ်ဝင်ကျမ်းအော်ဂျီကဘီဘီစီကိုပြောကြားရာတွင်သူတို့ကသူ့၏ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားပြောရန်အစိုးရဌာနချုပ်သို့ ဦး တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒါဟာဆန္ဒပြပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါပဲ" ဟုသူကပြောသည်။
သမ္မတ Muhammadu Buhari က Sars ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်ရဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာမခံချက်ပေးသော်လည်းနိုင်ငံအတွင်းရှိအခြားပြည်နယ်များတွင်လည်းဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်နေသည်။
ထိုနေ့တွင်ပင်စီးပွားရေးမြို့တော်တွင်အရပ်သားတစ် ဦး နှင့်ရဲတစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ဂို့ရဲများ၏ရက်စက်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အာဏာပိုင်များ၏ရိုးသားမှုကိုမေးခွန်းထုတ်ခြင်း။
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452 တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
EXCERPT - Jonathan Lehmann: "ဒီနေ့လိင်ကိုစားသုံးသူကောင်းအဖြစ်ရှုမြင်တယ်" - ဗီဒီယို
Ivory ကမ်းခြေ - Douk Saga ကဲ့သို့ DJ DJ Arafat သည်ဘ ၀ ၏အထွin်အထိပ်ကွယ်လွန်ခြင်း (RC 13 08 2019 P1) - ဗီဒီယိုခွေ
နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်အမှုထမ်း (၁၅) ဦး ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ကင်မရွန်းတွင်ရှိသည်
… Ferdinand Ngoh Ngoh နှင့် Laurent Esso (Direct) အကြားပိပက္ခဖြစ်ပွားရာအတွက်…